Xiriir miyaa ka dhexeeya darawalada baabuurta xamuulka ee Soomaalida iyo guursiga badan? | Hoombaro News
Warar iyo Barnaamijyo
Xiriir miyaa ka dhexeeya darawalada baabuurta xamuulka ee Soomaalida iyo guursiga badan?
Posted by wariye
Waayadan dambe waxaa soo badanaya darawalada soomaalida ee wada baabuurta xamuulka kuwaas oo isaga kala goosha waddamada Canada, Mareykanka iyo Mexico. safarkooda ayaa qaataa saacado badan isla markaasna waxay la kulmaan caqabado dhowr ah.
Darawalada baabuurta xamuulka waxay sheegayaan inay la kulmaan dhibaatooyin ay kamid yihiin inay soo jeedaan wakhti badan, hawada oo mararka qaar isbadasha, xayawaanaadka habeenkii waddooyinka mara oo shil geysan karo iyo aqoont la’aanta dalalka cusub ay baabuurta geeynayaan.
Darawaliinta soomaalida ah ayaa badeecadaha ganacsiga iyo rarka kaleba u kala gudbiya gobollo ka tirsan Mareykanka, Canada iyo Mexico, waxay ka sameeyaan howshaas lacago badan oo ay ku maareeyaan qoysaska oo ku nool dalka Soomaaliya.
Cabdikariim Maxamed Jawaaze oo kamid ah wadayaasha baabuurta xamuulka ayaa BBC u sheegay inay galaan safar qaadanayo wakhti badan taasina ay ku reebtay hurddo la’aan.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in mararka qaar ay kala garan waayaan goobaha ay dhigi lahaayeen baabuurta, gaar ahaan goobta ay ku dejinayaan rarka ay wadaan maadama gobolkaas ama dalkaas aysan aqoon u laheyn.
“Saacadihii oo aad u fara badan, hurddo xumo, waddooyinkii oo mararka qaar cimilada isbaddasho, waxaa kamid ah xayawaanaadka habeenkii waddooyinka lagu jiiro, meeshi aad alaabta geyneysay oo aad waayi kartid maadama aad dal cusub aad joogtid” ayuu yiri Cabdikariim.
Waxaa jiraa warar aanan la hubin oo sheegayo in darawalada baabuurta xamuulka ah ay goobtii ay tagaanba ka guursadaan , su’aashaas waxaan hordhignay Cabdikariim oo kamid ah darawalada.
Waxaa uu sheegay in arrintaasi weliggeedba lagu xaman jiray darawalada baabuurta xamuulka balse arrintaas aysan ka suurogeli karin darawalada maadama aysan u heyn wax wakhti ah.
Cabdikariim waxaa uu sidoo kale ka dhawaajiyay in darawalada rarka u kala gudbiyo dalalka ama gobollada aysan helin karin wakhti ay magaalada ku dhexgalaan oo ay ku sameystaan reer kale ama inay aqal galaan.
“Laakiin sida runtii markii aan galay waxaan ogaaday in howshaas aysan suurtogal aheyn gaar ahaan qolyahan labada waddan u kala goosho..way adagtahay in aad hesho fursad aad magaalada ku dhexgasho oo aad reer ku dhisato ama aad cid ku raadsato” ayuu yiri Cabdikariim.
Waxaa uu sheegay in darawalka uusan ku guursan karin xaas kale goobaha uu baabuurta geeyo maadama uu wakhti ku socdo si uu uga gaashaanto inuu waddada ku xannibmo.
Darawalada baabuurtan ayaa waxay sheegeen in shaqadan ay tahay mid xoriyad leh oo ay xitaa cibaadadooda gudan karaan marka ay howsha ku gudo jiraan iyo in dhaqaale fiican ay ka helaan marka loo barbardhigo shaqooyinka kale ee laga qabto halkaas.
Soomaalida ku sugan Mareykanka iyo Canada ayaa dadaal dheeri ah geliyaa sidii ay u heli lahaayeen ruqsooyinka darawalada ay ku shaqeeyaan maadama uu yahay suuqa ugu weyn ay u raadsadaan dhaqaalaha.